कसको पीसीआर गर्नुपर्छ र कसको पर्दैन ?
सरकारले अब निश्चित व्यक्तिहरुको मात्र पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार लक्षण बिनाका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण आवश्यक छैन।
सँगै मन्त्रालयले आफ्नै खर्चमा कूटनीतिक नियोग वा भिसाका लागि पीसीआर गर्न सकिने बताएको छ। यसबाहेक अरुले भने पीसीआर गर्नु आवश्यक नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ।